UNWTO bụ onye ntị chiri ma a bịa na WTTC na ngalaba njem nke onwe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » UNWTO bụ onye ntị chiri ma a bịa na WTTC na ngalaba njem nke onwe
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Iwughachi • Safety • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Echefu echefu ndi njem 3
Nri abalị ahụ na-arụ ụka n'abalị ụnyaahụ inye ego maka Zurab Pololikashvili re-election maka UNWTO Secretary General emeela ka nku anya dịrị n’ụwa niile.
O doro anya onye mechara gaa nri abalị ahụ, mana o doro anya na a kpọghị WTTC.
A na-elele njem njem na njem nlegharị anya nke ụwa (WTTC) dị ka olu maka nnukwu ụlọ ọrụ nzuzo. Dr. Taleb Rifai kwetara na David Scowsill, na ha bụ ụmụ ejima. Mgbe o kwuru nke a, Taleb bụ onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO, na David bụ onye isi nke WTTC.
WTTC nabatara ma kwado nkwado nke thetù Na-ahụ Maka Njikọ Aka na Mmepe (OECD) na nso nso a, na dịka WTTC si kwuo, ọ bụ ihe ha rịọrọ maka itinye usoro nyocha nke mba ụwa, ọgwụ mgbochi, na ntụkwasị obi nke ndị njem.
UNWTO nyere WTTC naanị nkeji 2 ka ọ mee ikpe ya.
Otu onye nọ n'ọkwa dị elu nke WTTC kwuru, sị: "Anyị agaghị enwe ike ịgbake ngwa ngwa ma ọ bụrụ na anyị anaghị arụkọ ọrụ ọnụ."
WTTC kwuru na ọ na-anọchite anya olu nke ụlọ ọrụ nzuzo na ụwa niile na kemgbe Eprel WTTC na-arụ ọrụ na gọọmentị amd ndị ọzọ na-ahazi mba ụwa na ụkpụrụ 4 nke mgbake.
WTTC na kwa Network Tourism Network (WTN) Ghọta na nhazi mba dị mkpa ka ndị ọrụ ọha na eze na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
O doro anya na UNWTO ejiriwo ụzọ mechiri emechi ngwa ngwa ngwa ngwa maka imekọ ihe ọnụ.